သမ္မတ Mr. Kovind သည် အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေးဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုသည် ခိုင်မာတောင့်တင်းပြီး၊ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ၏ အလည်အပါတ်ခရီးစဉ်က အရှိန်အဟုန်သစ်တခု ဖြည့်စွက်ပေးလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ | ESD | Burmese
Language عربي Arabic Bahasa Indonesia بلوچی Baluchi বাংলা Bangla 中文 Chinese دری Dari English Français French ગુજરાતી Gujarati हिन्दी Hindi ಕನ್ನಡ Kannada മലയാളം Malayalam नेपाली Nepali ଓଡ଼ିଆ Odia پښتو Pashto فارسی Persian ਪੰਜਾਬੀ Punjabi РУССКИЙ Russian සිංහල Sinhala Swahili தமிழ் Tamil	తెలుగు Telugu ไทย Thai བོད་ཡིག། Tibetan اردو Urdu
သမ္မတ Mr. Kovind သည် အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေးဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုသည် ခိုင်မာတောင့်တင်းပြီး၊ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ၏ အလည်အပါတ်ခရီးစဉ်က အရှိန်အဟုန်သစ်တခု ဖြည့်စွက်ပေးလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
July 11, 2018 prashant top-news
သမ္မတ Mr. Ram Nath Kovind သည် အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုက တောင့်တင်းခိုင်မာပြီး၊ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ၏ အလည်အပါတ်ခရီးစဉ်က အရှန်အဟုန်သစ်တခု ဖြည့်စွက်ပေးလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ Mr. Moon Jae-in အား Rashtrapati Bhavan သမ္မတ အိမ်တော်၌ ကြိုဆိုစဉ် Mr. Kovind သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Act East Policy ခေါ် အရှေ့သို့ အကျိုးပြုလုပ်ကိုင်ရေး မူဝါဒနှင့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၏ “New Southern Community” နှင့် သေသပ်စွာ သင့်မြတ်လျှက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတသည် အိန္ဒိယ-တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများက ခိုင်မာလျှက်ရှိနေပြီး၊ အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေး ဆက်ဆံမှုများက ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဒေါ်လာပေါင်း (၂၀) ဘီလီယံရှိခဲ့ကာ၊ နှစ်စဉ် ၂၅% ကြီးပွားမှုအတွက် ဟန်ပြင်လျှက်ရှိသည်ဟု ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ သမ္မတသည် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတအား ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းမှ လုံခြုံရေးအခြေအနေများ တည်တံ့ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိလာရေးသို့ ပြောင်းလဲရေးအတွက် သဓိဋ္ဌာန် ပြုမှုနှင့် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်မှုများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ Mr. Kovind သည် Mr. Moon ၏ ကြားဝင်စေ့စပ်မှုများမှာ ထက်မြက်ခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ယင်းတို့ကို အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဧည့်ခံပွဲတခု တည်ခင်းခဲ့ကြောင်း။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs Sushma Swaraj သည် ဂါနာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ms Shirley Ayorkor Botchway နှင့် နယူးဒေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် အကြီးမားဆုံး လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး ဆွေးနွေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်တန်းအရာရှိများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်ဟု နယူးဒေလီအစိုးရက ဖော်ပြလိုက်သည်။
လေးပွင့်ဆိုင် လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲ၏ အရေးပါမှု